Tonga ny beta an'ny iOS 11.1 feno emojis vaovao ary eto dia azonao atao ny misintona azy ireo | Vaovao IPhone
Tonga ny iOS 11.1 beta feno emoji vaovao ary eto dia azonao atao ny misintona azy ireo
Manohy mahita ny fahatongavan'i emoji vaovao ho an'ny kinova iOS ho avy izahay ary isaky ny tonga ny vaovao vaovao hisolo ny hafa na hiditra mivantana. Amin'ity tranga ity, izay ananantsika dia lisitr'ireo emoji vaovao 20 mahery efa hita. ao amin'ny kinova beta an'ny iOS 11.1.
Azo inoana fa ireo emoji vaovao rehetra ireo dia hiafara amin'ny fampiharana mivantana amin'ny kinova farany rehefa mivoaka. Tsy fantatsika raha hanolo ny sasany izy ireo na hanampy ireo efa misy, ny azo antoka dia vaovao izy ireo dia ho amin'ny fitaovana iOS rehetra izay nohavaozina tamin'ity kinova ity.
Mihabetsaka ny maodely azo alaina ho an'ny mpampiasa ary Apple dia manampy emoji isan-karazany matetika rehefa mandeha ny fotoana. Marihina fa izy rehetra ireo dia efa neken'ny Unicode 10 teo aloha, izay tsy isalasalana fa fahita ao amin'ireo fihetsika fampiharana Apple io.
Tsara ny manampy milina fikarohana kely amin'ny klavin'ny emojis mba hahatongavana amin'izy ireo haingana kokoa, saingy marina fa ireo be mpampiasa indrindra dia miseho mora amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry na azontsika atao mihitsy aza ny mamorona ireo izay tiantsika hiseho. ireo hitsin-dalana ireo. Amin'ny fakana sary dia afaka mahita ny sasany amin'ireo emoji vaovao ireo isika hampiharina ao amin'ny iOS 11.1, fa raha tianao dia azonao atao izany alohan'ny hampiasana ny rohy fampidinana avelantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Sintomy izao ireo emoji vaovao
Izy rehetra dia efa mivezivezy amin'ny tambajotra, koa raha iray amin'ireo te hanana emoji vaovao ampiharina amin'ity kinova beta an'ny iOS 11.1 ity ianao ary ho tonga amin'ny kinova ofisialy rehefa mivoaka, azonao atao ny misintona izy rehetra mivantana amin'ny fipihana eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Tonga ny iOS 11.1 beta feno emoji vaovao ary eto dia azonao atao ny misintona azy ireo
Ahoana ny fanamboarana ny lag mitendry amin'ny fitaovana iOS 11